Iko kutsvaga injini yekugadzirisa yakashandura tsanangudzo yayo here?
Haisi chakavanzika kune ani zvake kuti shanduro yemadhipatimendi yakashandura inochinja zvikuru uye haigari. Mumakore mashomanana apfuura, Google yakaita kuchinja kukuru kune maitiro ekugadzirisa maitiro. Chinangwa chikuru chekushandura uku ndechekuvandudza ruzivo rwemushandi nemawebsite anoisa pa TOP. Mazuva ano, Google inova nehanya uye inogona kuongorora mawebhusayithi nehuwandu hwezvinhu. Ndicho chikonzero musoro wekutsvaga injini yekutsanangurira tsananguro inenge yakanyanya kudiwa. Kuti uwane nzvimbo yepamusoro, unofanirwa kuita zvose zvinoshandiswa pakutsvaga injini yekugadzirisa unyanzvi hunoita kuti zvose zvisingabatsiri-. Muchikamu chino, tichakurukura kuti Google algorithm updates inokanganisa sei vatengesi vanoshandisa zviri pamutemo nzira dze SEO uye kuti vanochengetedza sei nzvimbo dzepaiti kana mitemo ye SEO game ichishandurwa.
Nhasi mbiru dzekutsvaga injini yekugadzirisa
Zvose nyanzvi dzeSOO dzinobvumirana kuti pane imwe isingashanduki muhutano hwekugadzirisa - huwandu hwehutano. Kana iwe uchiramba uine huwandu hwehuwandu hwakanaka, hunowana hukama hunobvumirana kubva kune dzimwe nzvimbo dzepamutemo, nzvimbo yako ichava mu TOP pane chero mamiriro ezvinhu. Zvisinei, nzira yekuvandudza nhamba uye hutano hwehukama huripo hwave dzisina nguva. Pari zvino, unoda kuvaka purogiramu yako yekutsvaga inotarisa pane zvinhu zvitatu zvinotanga - hutano hwehutano, hutano hwemagariro ehupfumi, uye chivakwa chekubatanidza. Kuti uwane hukuru hwekusimudza hukuru muhutsanho, unoda kusonganisa zvose izvi kugadzirisa zvinhu.
Nhasi, zvinyorwa zvave nzira yakakomba pakati pevatengesi veInternet sezvo Google inotanga kunyora pasi. Kuti uvandudze webhusaiti yako yepamusoro, unoda kuramba uine hupamhi hwepamusoro uye uine zvigadziro pane zvakakosha pamisoro yako ye marusi niche. Iva nechokwadi chokuti iwe unonyatsoisa mutsva mazwi ekutsvaga mune zvaunenge uchitaura sezviri pasi peSOO tsanangudzo. Uyezve, unofanirwa kuita kuti zvinyorwa zvako zvive zvakanaka zvakagadzirwa kuburikidza nekushandisa zviguru, ndima uye nhamba dzemazita. Google inotarisana nehuwandu nehuwandu hwehutano zviri nani pane zvishoma uye zvishoma.
Kuvakwa kwehukama inzira inokosha yekugadzirisa webhusaiti inogona kuitwa zvose zvisikwa uye zvisingaiti. Organic kana chichena-chikwata SEO chikwata chekuvaka chinoreva kuwana mazamu juisi kune imwe nzvimbo kuburikidza nenzira dzebhuku rinotumira, kugoverana kwekubatanidza, uye zvinyorwa zvinyorwa. Izvo zvisina-zvekugadzira kana tsvuku-SEO inongova nezvekubatana kwekubatanidza nekudyidzana kwekurima. Iyo nzira iri nyore yekukwezva vashandisi. Zvisinei, unofanirwa kunzwisisa kuti vashandisi vanoenda kunzvimbo yako nekutengesa mabhizimusi havagoni kuchinja kuva vatengi vako. Uyezve, rudzi urwu rwemagetsi-ruzha rwekugadzirisa huri kutongerwa nevanjini uye rinogona kukuvadza nzvimbo yako. Iwe unofanirwa kuwana zvikwereti kuburikidza nekubvumirana panzvimbo pokubhadhara ivo.
Unofanirwa kufunga kuti nzira yekuisa mashoko e-keyword-rich anchor mumakambani ekubudiswa kwepaIndaneti ane chero chinhu chinokosha mumazuva ano. Mazuva ano Google inobata zvinyorwa zvinyorwa zvinyorwa mumashizha ekubudisa mabhuku uye mamwe maitiro ezvinyorwa sezvisiri zvepanyama kana zvakabhadharwa. Google inoda kumira kusanzwisisika kwekugadzirisa chivakwa kubva kubudisi rekubudiswa. Zvisinei, kana vamwe vanhu vainyanya kufunga vatungamiri kunyora pamusoro pezvinhu zvenyu kana mazano uye nekuisa hukama hwakakodzera pairi, saka iyo inofungidzirwa sechibvumirano chakawanikwa cheGoogle.
. Mazuva ano, vanowedzera uye vanoshandisa vauya kumawebsite kuburikidza nemasangano ehupfambidzani sezvavanosarudza kugamuchira ruzivo mune imwe nzira inofadza uye inooneka. Kuti uvandudze kutarisa kwako kwechiratidzo, iwe pachena unoda kuva nehutano hwekugara. Ichakubatsira iwe kuti uswedere pedyo nevanogona vatengi uye unzwisise zvavanoda Source .